ခုံသမာဓိကောင်စီ၏ General Enterprise အထည်ချုပ်စက်ရုံ အငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်သည့် ဆုံးဖြတ်ချက် (၃၉/၂၀၁၄) ‹ အလုပျသမား၊ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးနှငျ့ ပွညျသူ့အငျအားဝနျကွီးဌာန
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဒဂုံမြို့သစ် (တောင်ပိုင်း) မြို့နယ်၊ ဒဂုံအရှေ့စက်မှုဇုန်၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်း ၊ အမှတ် (၅၉) ရှိ General Enterprise အထည်ချုပ် စက်ရုံ ၏ ပိုင်ရှင် Mr. Sung Tsung Hsu နှင့် အလုပ်သမား ဒေါ်အေးအေးမိုး တို့ ဖြစ်ပွားသော အငြင်းပွားမှုအား ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ခုံသမာဓိအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့မှု အပေါ်ကျေနပ်မှုမရှိပါသဖြင့်ခုံသမာဓိကောင်စီသို့ အယူခံတက်လာမှု အပေါ် ခုံသမာဓိကောင်စီမှ ဥက္ကဋ္ဌ ဦးအောင်စံတင် ၊ အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သော ဦးဌေးအောင် နှင့် ဒေါ်စန်းစန်းဦး တို့ ပါဝင်သောခုံအဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းပြီးခုံအဖွဲ့မှတောင်းဆို သူနှင့်တောင်းဆိုခြင်း ခံရသူတို့၏ တင်ပြသည့် သက်သေထွက်ဆို ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အမှုအမှတ် (၃၉/၂၀၁၄)ဖြင့် ၁၅-၁၂-၂၀၁၄ ရက်နေ့ တွင် အောက်ပါအတိုင်း ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်-
ခုံသမာဓိကောင်စီ ၏ (၃၉/၂၀၁၄) ဆုံးဖြတ်ချက် အပြည့်အစုံ ဖတ်ရှုရန် . . . . . (399)